Angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2017 sy ny vinavinan'ny taona 2018 | Fanavaozana maintso
Angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2017 sy ny vinavinan'ny ho an'ny taona 2018
Tomàs Bigordà | | Herin'ny rivotra, Angovo azo havaozina
Tao anatin'ny herintaona dia ny angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2017 no faharoa mpamatsy ny rafitra angovo eto amin'ny firenentsika. Ny angovo 23 GW an'ny angovo dia namokatra mihoatra ny 47 TWh, izay maneho ny 20% amin'ny totalin'ny herinaratra lany.
Ny herin'ny rivotra dia tsara fitondran-tena, manome herinaratra mitovy na mihoatra amin'ny 2016.
1 Herin'ny rivotra
1.1 Rivotra avy any ivelany
2 Varotra lavanty azo havaozina
4 Fanamby amin'ny ho avy
Amin'izao fotoana izao dia misy turbine rivotra maherin'ny 20.000 1.000 napetraka ao Espana, zaraina amin'ireo toeram-piompiana rivotra mihoatra ny XNUMX. Amin'ny ankabeazany, nanana izy ireo fitondran-tena tsara amin'ny andro faratampony.
Araka ny voalazan'ny Red Eléctrica Española (REE), ny firaketana ny famokarana angovo avy amin'ny rivotra dia nitranga tamin'ny 27 Desambra 2017, miaraka amin'ny famokarana 330 GWh, izay ny teknolojia voalohany amin'ny fifangaroan'ny taranaka, miaraka amin'ny takian'ny herinaratra 47%.
Raha ny marina, ny volana desambra 2017 dia lasa volana desambra niaraka tamin'ny taranaka maro kokoa hery avy amin'ny tantara.
Raha tsy nisy io anjara biriky ny angovo avy amin'ny rivotra io tamin'ny volana desambra lasa teo, ny vidin'ny tsenan'ny herinaratra dia mety hatramin'ny € 20 / MWh avo kokoa, noho izany mitombo amin'ny famokarana rivotra dia midika famonjena 30-35% raha oharina tamin'ny taon-dasa (400 € eo ho eo)
Misy indostria 210 koa miparitaka manerana ny jeografia Espaniôla, mametraka an'i Espana ho mpamokatra lehibe indrindra manerantany. Mampalahelo fa noho ny didin'ny Antoko malaza, ireo ivon-toerana ireo dia nanokana ny asany rehetra hanondranana.
Rivotra avy any ivelany
Hatramin'ny taon-dasa, ny indostrian'ny rivotra Espaniola dia nampiroborobo ny tsenan'ny rivotra any ivelany. Avy amin'ny sehatra teknolojia an'ny sehatry ny angovo Espaniôla, REOLTEC, ny fikarohana, ny fampandrosoana ary ny hetsika fanavaozana dia natambatra sy nandrindra izay mamaly ny zavatra ilaina an'ny sehatry ny rivotra Espaniôla. Tamin'ny taona 2017, ny fiaraha-miasa amin'ny R& D & I eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe sy ny orinasa dia nitombo tao amin'ny tsenan'ny fifaninanana tena mahomby, nanamora ny indostrian'ny rivotra Espaniola ny toerany tamin'ny rivotra avy any ivelany.
Varotra lavanty azo havaozina
Mba hanarahana ny torolàlana eropeana, dia nanao lavanty miisa 3 azo havaozina ny governemanta, roa tamin'ny 2017 ary iray tamin'ny 2016. Ireo dia nanome tosika lehibe ny sehatry ny rivotra Espaniola taorian'ny taona vitsy lasa izay 65 MW fotsiny ny herin'ny rivotra. napetraka.
Mba hihaonana amin'ny fanamby amin'ny fandaminana ny tetezamita angovo, AEE dia nanomana famakafakana izay manangona ny toeran'ny sehatra manoloana ny famolavolana ny lalàna momba ny fiovan'ny toetr'andro sy ny tetezamita angovo.
Vokatry ny fanadihadiana ny AEE, ny herin'ny rivotra napetraka tamin'ny taona 2020 dia hahatratra 28.000 MW (raha jerena ireo lavanty vaovao efa natolotra sy ny haben'ny rivotra Canarian), ka hiakatra 1.700 MW isan-taona ny herin'ny rivotra eo anelanelan'ny faran'ny 2017 sy ny fiandohan'ny 2020.
Ao anatin'ny folo taona manaraka dia hitombo 1.200 MW isan-taona hatramin'ny 2030, mahatratra ny 40 GW an'ny herinaratra napetraka.
Misaotra an'ireto turbinin'ny rivotra vaovao avy amin'ny fandalinana ny AEE, ny fandefasana ny sehatry ny herinaratra Espaniôla dia hihena 2020% amin'ny taona 30 raha oharina amin'ny taona 2005 (taona fanovozan-kevitra ho an'ny rafitra varotra emission eropeana, ETS amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy) ary mihoatra ny 40% amin'ny 2030.
Araka ny hevitry ny PREPA, Ny fanaparitahana 100% dia tratra amin'ny 2040. Ankoatr'izay, ny fifangaroan'ny herinaratra Espaniola dia hahatratra 40% ny tinady amin'ny fanavaozana amin'ny taona 2020, 62% amin'ny 2030, 92% amin'ny 2040 ary 100% amin'ny 2050.
Fanamby amin'ny ho avy
ny fifangaroan'ny herinaratra mahay mandanjalanja.
Ny fandrindrana ny vatana samihafa miaraka amin'ny fahaizana Haavo nacional ary hery mitokana.
Mitadiava fifandanjana eo amin'ny fampihenana ny vidin'ny herinaratra sy ny fampiasam-bola ho avy. Ny mekanisma dia tsy maintsy ho hita ka ny toe-javatra maharitratoy ny fifanarahana roa tonta na fefy vidiny.
Mametraha rafitra mifehy mifehy izay mamela hisarika fampiasam-bola ilaina.
Raha ny nosy Canarian dia zava-dehibe ny filokana amin'ny angovo rivotra hampidina ny vidin'ny taranaka any amin'ireo nosy (amin'izao fotoana izao ny vidiny dia mihoatra ny avo roa heny noho ny any amin'ny saikinosy, noho ny fiankinan-doha amin'ny lasantsy fosily).
Ny tanjona kendren'ny fikarohana dia ny hampihenana ny vidiny sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra, ny fampidirana tambajotra amin'ny toe-javatra azo antoka amin'ny fiarovana sy ny fahamendrehana ary ny fanatsarana ny fizotry ny famokarana. Tokony ho izany rehetra izany fototra mitazona an'i Espana ho mpitarika ny haitao any ivelany ary mametraka ny fepetra ilaina amin'ny fampiharana ny angovo avy any ivelany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2017 sy ny vinavinan'ny ho an'ny taona 2018
Ireo faritany goavambe any Espana
Manadihady ny antony nahatonga ny lozam-pifamoivoizana tao Sanchi izy ireo